Izindlu zaseDuarte - Indlu T2, enokubukwa kolwandle
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Célia
U-Célia Ungumbungazi ovelele
Izindlu zaseDuarte - Indlu T2
Itholakala e-Pederneira Nazaré, iyindlu ye-T2, esitezi esiphansi, ehlanzeke ngokwedlulele, yavuselelwa kabusha futhi ifakwe zonke izinsiza ezidingekayo ukuze uchithe iholide elihle.
Inethala elibanzi elinombono omangalisayo wolwandle nendawo yolwandle, lapho ekugcineni kosuku ungajabulela ukushona kwelanga okumangalisayo.
Emnyango wendawo yokuhlala kunendawo yokukhipha amanzi enejeli yotshwala yokuhlanza izandla ukuze ukwazi ukubulala amagciwane ezandleni zakho njalo uma ungena kule ndawo.
Indlu yesitayela sesimanje ene-air conditioning (ibanda/ukushisa), inamakamelo okulala amabili, womabili anombhede okabili, ithelevishini kanye nezokulala. Igumbi lokuhlala eline-TV nosofa. Ikhishi elinendawo yokudlela, elifakwe (isitofu nohhavini, ifriji, i-microwave, umshini wekhofi, i-toaster). Indlu yokugezela inamathawula, izinto zokugeza kanye nesomisi sezinwele samahhala.
Wonke amathelevishini ayisicaba futhi anamashaneli ekhebula. Ine-WiFi yamahhala.
Ngaphandle, ungakwazi futhi ukujabulela ivulandi lapho kunendawo yokosa inyama, kanye nethala elibanzi elinendawo yokudla, linesikhala esinomshini wokuwasha osetshenziswa ngokujwayelekile (yabiwe nezindlu ezimbili ze-T1 engiziqasha endaweni eyodwa).
(I-patio evulekile kakhulu kanye nethala lilungele ukugcina ibanga elingokomzimba nelezenhlalo).
Ingaphakathi lendlu liyimfihlo kuphela kubavakashi abayibhukhayo, alabiwe nanoma ubani omunye, kuphela i-patio nethala okwabelwana ngalo, kokubili kuvulekile futhi indlu ngayinye inefenisha yayo yangaphandle.
Ikhaya lakho leholide selifikile, endaweni ehlanzeke ngokwedlulele, ezolile nemukelayo futhi ujabulele umbono omangalisayo.
Indawo evamile endaweni enenhlanhla enokubukwa kwe-panoramic phezu kolwandle kanye nendawo yolwandle, emigwaqweni ngisho nanamuhla kungenzeka ukubuka amaNazaretha adumile ngemvunulo evamile yeziketi eziyisikhombisa.
Cishe kungamamitha angama-720 (imizuzu eyi-15) ukusuka endaweni yolwandle, nemizuzu emi-4 ngemoto.
Ezindaweni ezizungezile kukhona amathilomu, izindawo zokudlela kanye nezikhumbuzo.
Ngiyatholakalela noma yiluphi ulwazi noma usizo izivakashi ezingase ziludinge.
UCélia Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 53143/AL